ASAHI Scholarship ပညာတော်သင်ဆုရ ကျောင်းသားများနှင့် အင်တာဗျူး !!! - JAPO Japanese News
ASAHI Scholarship ပညာတော်သင်ဆုရ ကျောင်းသားများနှင့် အင်တာဗျူး !!!
သော 13 Mar 2020, 13:58 ညနေ
ASAHI scholarship လို့ခေါ်တဲ့ ပညာတော်သင်ဆုအကြောင်းကို စာဖတ်သူတို့ သိကြပြီးပြီလား?
ဒီပညာတော်သင်ဆုလေးဟာဆိုရင် Asahi Scholarship Association လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းက ဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး၊ ငွေပြန်ပေးစရာမလိုဘဲ full scholarship ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီပညာတော်သင်ဆုရ ကျောင်းသားတွေဟာ ASA（朝日新聞販売所）Asahi သတင်းစာထုတ်ဝေရောင်းချတဲ့နေရာမှာ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညနေခင်းတစ်ကြိမ် သတင်းစာတွေကို လိုက်ပို့ပေးရင်း၊ ပညာတော်သင်ဆုကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ နှစ်တိတိ ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းကို တက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မိမိဆန္ဒရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ဒါမှမဟုတ် Senmon gakko လို့ခေါ်တဲ့ အသက်မွေးမှုကျောင်းကို ဆက်ပြီးတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
စကားမစပ် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သတင်းစာပို့တဲ့လုပ်ငန်းကို စာဖတ်သူတို့ သိပြီးကြပြီလား?
မနက်အစောကြီးတစ်ချိန်နဲ့ ညနေစောင်းတစ်ချိန်မှာ ပုံမှန်သတင်းစာမှာယူတဲ့အိမ်တွေကို bike စီးပြီး သတင်းစာ လိုက်ပို့ပေးရတဲ့ အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ခင်းအစောကြီးပို့ပေးရတဲ့အချိန်ကတော့ နံနက် ၃ နာရီကနေ ၅ နာရီ အတွင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနက်ပိုင်းပို့ပေးဖို့အတွက်တော့ စောစောမအိပ်ထားရင်မရပါဘူးနော် ……
ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ ASAHI Scholarship ရဲ့ ၅ ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားမယ့် ကျောင်းသားတွေရဲ့ ရင်တွင်းဖြစ်စကားသံလေးတွေကို နားထောင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီကျောင်းသားတွေက ယခု3လပိုင်း 23 ရက်နေ့မှာ ဂျပန်ကိုသွားရတော့မှာဖြစ်ပြီး၊ အခုအချိန်မှာ ဂျပန်စာလေ့လာမှုကို အားကြိုးမာန်တက်နဲ့ တစ်စိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိပါတယ်။
Saitama, Ikebukuro, Yokohama စတဲ့ မြို့ ၃ မြို့မှာလူခွဲပြီး နေရာချပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲ့ဒီနေရာအသီးသီးမှာ သတင်းစာပို့ပေးရင်းနဲ့ ၂ နှစ်တိတိ ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းကို တက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်စာဘာသာစကားကျောင်းကို တက်နေတဲ့အတွင်းမှာလည်း ASAHI က နေဖို့အတွက် အဆောင်ကိုလည်း ပြင်ထားပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကိုစိတ်ချရတယ်နော်……
Scholarship အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲကမှ ဒီကကျောင်းသားတွေက ဘာကြောင့် ASAHI ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလဲ?
ဖြေ=“အခြား full scholarship တွေကရရှိဖို့ခက်ခဲပေမဲ့၊ ASAHI ကတော့ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက် ၊ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပြည့်စုံမယ်သာဆိုရင် မည်သူမဆို ဒီပညာတော်သင်ဆုကို ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ” ဆိုပြီး ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ASAHI အတွက်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကလည်း အနည်းငယ်ရှိနေပေမဲ့၊ ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှု အနေနဲ့ပြောရရင် N4 အောင်ပြီးသူတိုင်း အင်တာဗျူးဝင်ခွင့်ရှိပြီး၊ အဲ့ဒီအင်တာဗျူးမှာ အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ Scholarship ကိုရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေက ပြည့်စုံတာနဲ့ ပညာတော်သင်ဆုကို ရရှိမယ်ဆိုတာက အရမ်းကိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်နော်..!
နောက်ပြီး ဂျပန်မှာကျောင်းသွားတက်ဖို့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သိပ်ပြီးမတွင်ကျယ်တဲ့ သတင်းစာပို့ခြင်းလုပ်ငန်းကို တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကျောင်းသားတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။
“ မနက်အစောကြီးထရတာ ပင်ပန်းမယ်နော်….၊ စည်းကမ်းတွေလည်း အများကြီးရှိလို့ ခက်ခဲမယ့်ပုံပဲ” စတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
သို့သော် “ စိတ်လှုပ်ရှားနေပေမဲ့လည်း ပျော်ပါတယ်” ဆိုပြီး ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ပြောနေကြတာက အရမ်းကို အထင်ကြီးဖို့ကောင်းပါတယ်။
စကားမစပ် ဘာတစ်ခုမှမသိသေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ သတင်းစာပို့ခြင်းလုပ်ငန်းကို အစပြုခိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာရှိနေသေးတဲ့အချိန်အတွင်း MAJA မှာ သတင်းစာပို့ခြင်းအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေကို အရင်သင်ယူလေ့လာရမယ်၊ လိုက်ပို့ပေးတဲ့အချိန်မှာလည်း bike စီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမှာကတည်းက လိုင်စင်လုပ်ထားရပါမယ်၊….. အစရှိတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှ ဂျပန်ကိုသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာတော်သင်ဆုအကြောင်းပြောဆိုကြတာအပြင်၊ နိုင်ငံခြားသားကျောင်းသားရဲ့ နေထိုင်မှု ဘဝကို ပျော်ရွှင်တယ် ဆိုတာနဲ့လည်း ပတ်သက်ပြီး စကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းမှာ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ ကျောင်းသားတွေနဲ့လည်း
မီးပန်းတွေသွားကြည့်ရမှာတို့… အစရှိသဖြင့် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်တဲ့..။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ဂျပန်မှာ ကျောင်းသွားမတက်ခင် ဘာကိုအရေးအကြီးဆုံး ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ ? လို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ “ ဂျပန်စာကိုပဲ သေသေချာချာလေးလေ့လာပြီးတော့မှ သွားသင့်ပါတယ် ” လို့ ကျောင်းသားအားလုံးဆီကနေ တစ်သံတည်း ကြားခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာအခြေအနေကို ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့ အရေးကြီးကြောင်း ပြောကြပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်ကတော့ ASAHI scholarship နဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပညာတော်သင်သွားကြတော့မယ့် ကျောင်းသား ၁၂ ယောက် နဲ့ စကားပြောခဲ့ကြတာပါ…။
ကျောင်းသားတိုင်းလိုလိုမှာ စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတာကို တွေ့ရပြီး၊ အခုကနေစပြီး ပညာတော်သင်ကျောင်းသားဘဝကို ရင်ခုန်စွာနဲ့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ ကျွန်မလည်း ခံစားရပါတယ်။
လက်ရှိနေထိုင်မှုမှာ အသားမကျသေးတို့…….. ဒီလို ပင်ပန်းမှုတွေ ရှိလာမှာဖြစ်ပေမဲ့၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဂျပန်ကိုအတူတူလာခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့အတူတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ပြီး အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်စေချင်ပါတယ် ！
အခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ ASAHI scholarship အပြင်၊ နောက်ထပ် အခြားပညာတော်သင်ဆုအမျိုးမျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဂျပန်မှာကျောင်းသွားတက်ချင်တယ် ！ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် MAJA ဒါမှမဟုတ် OJEIC က ပညာတော်သင်ဆုအမျိုးမျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
တကယ်လို့ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ကို စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ကြိမ်လောက် MAJA ဒါမှမဟုတ် OJEIC ရဲ့ Facebook page
ကိုဝင်ကြည့်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား ?
MAJA (Myanmar Association of Japan Alumni)
Facebook page : https://www.facebook.com/MyanmarAssociationOfJapanAlumniMAJA
OJEIC (Okayama University Japan Educational Information Center, Myanmar)
Facebook page : https://www.facebook.com/StudyinJapanOfficeYangon/
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူနှင့် တွေ့ဆုံးမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း ၂ !!!
ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာ Scholarship ကျောင်းသားတစ်ချို့နဲ့ အင်တာဗျူး
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကျောင်းသူနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း အပိုင်း ၁ !!!
ဂျပန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁၃　ဦးထဲက ၁ ဦးက ကျောင်းထွက်ဖို့စီစဥ်နေ ?
ဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Mask !!!!!!!
အရမ်းအဆင်ပြေတဲ့ ဘက်စုံသုံးသန့်စင်ခန်း !!!!
ဓါတ်လှေကားနဲ့ အာကာသကို သွားကြမယ်
လူ ၁၃ ယောက်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းသတ်ခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ် နင်ဂျာ Yukichika Kanakubo !!!!
Syria မှာ ကရာ‌တေးပညာကို စတင်ပို့ချခဲ့သူ (or) အရက်မူးနေတာတောင် လေးစားခြင်းခံရသူ !!!!
ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်မှာတွေ့ရတဲ့ မီးဖို‌ချောင်သုံးဓါးအမျိုးမျိုး !!!!!
မင်းသမီးချောလေး Mirei Kiritani ကျန်းမာစွာနဲ့ သားဦးလေးကိုမွေးဖွား !!!!!
Rurouni Kenshin ရဲ့မော်ဒယ်ဖြစ်ခဲ့သူ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူသား !!!!
အိမ်ထဲရေမဝင်အောင် ရေနဲ့ကာထားမယ် !!!!
ရှေ့ကိုပဲဆက်လျှောက်ပါ!! Keep Moving Forward !!!!!
ဂျပန်မင်းသမီးမှ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့ စက်ရုပ် !!!!